Kusemthethweni: iXiaomi Mi6 izakwaziswa nge-Epreli 19 | Iindaba zeGajethi
Izolo siphindaphinde iindaba ezihamba kumajelo osasazo njengomlilo wasendle apho bekusithiwa iXiaomi Mi6 entsha iza kuziswa namhlanje, kule meko into esiyiqinisekisileyo namhlanje kukuba intetho ayisiyi kuba namhlanje, ukuba ayizukuba njalo ube ngu-Epreli 19 olandelayo. Esi sisiqinisekiso esisemthethweni ke sele sinomhla wale ntetho izakubanjelwa eBeijing. Amarhe abonisa ukuba namhlanje iyakuba lusuku olukhethelwe le ntetho ngenxa yokupapashwa yi-CEO yeXiaomi, kodwa oku kwenzekile ngomhla wokugqibela oza kuba ngoLwesithathu olandelayo, nge-Epreli 19.
Oku kusemthethweni kuba sele iqinisekisiwe kwi Iiforamu ze-MIUI Ke ngoku akukho mpazamo inokwenzeka. Kwimeko nayiphi na into, kwakusele kuthethwe ixesha elidlulileyo ukuba esi sixhobo sitsha siza kuboniswa ngenyanga ka-Epreli, kodwa ngoku sinomhla ngqo kunye nendawo yale ntetho.
Kubonakala ngathi ayizukuhluka kakhulu kuyilo lweMi5 yangoku Ukuba simamela amarhe, kodwa baya kongeza utshintsho oluninzi ngaphakathi kweso sixhobo kulindeleke ukuba babenakho ukukhuphisana nesiphelo esiphakamileyo se-Android njengoko isiphelo esiphezulu senkampani yaseTshayina besisoloko sisenza. Ngayiphi na imeko siza kube sinikele ingqalelo kumarhe anokuvela ngoku kwaye ngakumbi sikhumbula ukuba ukwenziwa kwale Xiaomi intsha ikufuphi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Kusemthethweni: iXiaomi Mi6 izakwaziswa ngoAprili 19
Ukugcinwa kwe-Samsung Galaxy S8 eSouth Korea kwenza imbali